KKs3- ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 02h 24m 44.4s, −73° 30′ 51″
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 02° 24′ 44.4″ 
နိမ့်ဆင်းမှု −73° 30′ 51″ 
ပကတိအရွယ်အစား (V) 14.47
ဂလက်ဆီ အမျိုးအစား dSph 
LEDA 9140, PGC 9140, SGC 022423-7344.3, SGC 0224.3-7345, KKs 3
KKs3သည် Local Group ထဲရှိ ဂလက်ဆီပုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၇ မီလီယံ ကွာဝေးသည်။  KKs3၏ ထုထည်မှာ ၂.၃ × ၁၀၇M☉ (နေအဆပေါင်း ၂၃ မီလီယံ) ရှိသည်။ ဂလက်ဆီရှိ ၄ ပုံ ၃ ပုံသော ကြယ်များသည် သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၂ ဘီလီယံနှစ် ရှိသည်။ ယင်းအား ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ I. D. Karachentsev (6 November 2014). "A new isolated dSph galaxy near the Local Group". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters 447 (1). doi:10.1093/mnrasl/slu181. Bibcode: 2015MNRAS.447L..85K.
↑ "Nuclei of dwarf spheroidal galaxies KKs3and ESO 269−66 and their counterparts in our Galaxy" (2017). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 471 (2): 1955. doi:10.1093/mnras/stx1605. Bibcode: 2017MNRAS.471.1955S.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Massey၊ Robert (22 December 2014)။ The Milky Way's new neighbour။ 23 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ LEDA 9140 -- Galaxy။ SIMBAD။ 2014-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Object No. 1 - SGC 0224.3-7345။ NASA/IPAC Extragalactic Database။ 2014-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yeager၊ Ashley (22 December 2014)။ Hubble telescope spots our galaxy's newest neighbor။ 23 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=KKs_3&oldid=398465" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။